विश्वका सबैभन्दा लोकप्रिय र सफल लगानीकर्ता हुन् वारेन बफेट, जसले आफ्नो अधिकांश सम्पत्ति सेयर बजारमा लगानी गरेर सिर्जना गरेका छन्, कुन सूचक प्रयोग गरेर बजारमा कहिले बढी लगानी गर्ने कहिले कम लगानी गर्ने भनेर कसरि पत्ता लगाउने?
हामीले ‘सूचक’ शब्द कहिले प्रयोग गर्छौं? मुख्य रूपमा, हामी सवारी साधन चलाउँदा संकेतक शब्द प्रयोग गर्छौं। उदाहरणका लागि, जब हामी दायाँ मोड लिन चाहन्छौं, ड्राइभ गर्दा, हामीले पहिले सही इन्डिकेटर दिनुपर्छ र त्यसपछि दायाँ मोड लिनुपर्छ, यद्यपि प्रायः मानिसहरूले पहिले टर्न लिन्छन् र पछि सूचक दिन्छ। त्यो फरक कथा हो। त्यसोभए के त्यहाँ कुनै सूचक छ जसले हामीलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न महँगो छ वा लगानी गर्ने सही समय कहिले हो भनेर मार्गदर्शन गर्न सक्छ?
सन् २००१ मा विश्वका सबैभन्दा सफल लगानीकर्ता वारेन बफेटले यस्तो सूचकको रिपोर्ट/वर्णन गरेका थिए । त्यो सूचकले बजार कहिले कम महँगो हुन्छ र कहिले लगानी गर्न बढी महँगो हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ। यसलाई ‘Market Cap to GDP Ratio’ भनिन्छ।
यो मार्केट क्याप र जीडीपी अनुपात के हो?
तर पहिले, हामी मार्केट क्याप के हो हेरौं,
मार्केट क्यापले बजार पूंजीकरणलाई बुझाउँछ। यसलाई एउटा सरल उदाहरणबाट बुझौं। XYZ लिमिटेड नामको कम्पनीलाई विचार गर्नुहोस्। XYZ लिमिटेडको शेयर मूल्य रु. 10 प्रति शेयर। अब यो बजारमा धेरै धेरै सेयर हुने स्पष्ट छ। बजारमा XYZ ltd को 1000 शेयरहरू विचार गरौं। त्यसोभए, 1000 शेयरलाई प्रति शेयर, शेयर मूल्यले गुणन गरेमा तपाईले बजारमा उपलब्ध शेयरहरूको कुल रकम (मूल्य) प्राप्त गर्नेछ। यसरी, १000*१0 = रु. १०,००० त्यसैले बजारमा XYZ ltd को शेयरको कुल मूल्य रु. १०,०००। तसर्थ, XYZ ltd को बजार पूँजीकरण रु. १0,000 रहेको बुझिन्छ।
अहिले सेयर बजार धेरै कम्पनी मिलेर बनेको तथ्यले यसरी बजारमा रहेका प्रत्येक कम्पनीको बजार पूँजीकरणलाई सँगै जोड्ने हो भने सम्पूर्ण सेयर बजारको बजार पुँजीकरण प्राप्त हुनेछ ।
अब बुझौं, GDP भनेको के हो?
GDP ले घरेलु उत्पादनलाई जनाउँछ। यसलाई सरल उदाहरणबाट बुझौं। कलम निर्माण गर्ने कम्पनीलाई विचार गर्नुहोस्। एक कलमको मूल्य रु. 10 प्रत्येक। यदि त्यो कम्पनीले एक वर्षमा लगभग 1000 कलमहरू उत्पादन गर्छ भने, 1000 लाई 10 ले गुणा गरे 10,000 बराबर हुन्छ। त्यसैले एक वर्षमा उनीहरूको कुल उत्पादन रु. १०,०००। यसरी, यदि हामीले कुनै देशका सबै कम्पनीहरूको उत्पादनलाई जोड्यौं भने, हामीले त्यो देशको जीडीपी प्राप्त गर्नेछौं।
वारेन बफेट प्रायः एक देशको सम्पूर्ण शेयर बजार पूँजी सधैं त्यो देशको जीडीपी भन्दा कम हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्छन् र विश्वास गर्छन्। शेयर बजार पुँजी कुनै देशको जीडीपीभन्दा बढी छ भने यसले बजार मूल्याङ्कन महँगो भएको जनाउँछ। र यदि शेयर बजार पूँजी देशको जीडीपी भन्दा कम छ भने, त्यहाँ लगानी गर्ने अवसर छ। त्यसोभए यदि त्यहाँ मूल्य सिर्जनाको लागि एक स्थान छ भने तपाईले लगानी गरेर राम्रो प्रतिफल कमाउने अवसर पाउन सक्नुहुन्छ।
यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि वारेन बफेटले आफ्नो सम्पूर्ण पैसा शेयर बजारमा कहिल्यै लगानी गर्दैनन्। कृपया यस बिन्दुमा ध्यान दिनुहोस्। यदि हामीले बफेटको कम्पनी बर्कशायर ह्याथवेको चार्टको नगद स्थितिलाई हेर्छौं भने, हामीले बफेटले बजार मूल्याङ्कन लगानीको लागि उपयुक्त छ भन्ने सोच्दा मात्र उसले बजारमा बढी लगानी गर्ने समय पाउनेछौं। अर्कोतर्फ, बजार मूल्याङ्कन महँगो भएको थाहा पाएमा उसले बजारमा बढी लगानी गर्नुको सट्टा नगदमै बस्न रोज्छ ।
मार्केट क्याप देखि जीडीपी अनुपात सम्म हामी बजार मूल्याङ्कन महँगो छ कि छैन भन्ने चित्र प्राप्त गर्नेछौं, तर यस्तो बजारमा मूल्याङ्कन सिर्जना गर्ने अवसर छ? हामीले कुनै निश्चित रकम लगानी गरेमा कति कमाउन सकिन्छ भनेर कुन अनुपातले बताउनेछ| त्यो अनुपातलाई ‘मूल्य आम्दानी अनुपात’ भनिन्छ। हामी सबैलाई यो अनुपातबारे जानकारी छ।
उदाहरणका लागि, मूल्य आम्दानी अनुपातले पुन: कमाउनको लागि हामीले कति रकम लगानी गर्नुपर्छ भनेर चित्रण गर्छ। त्यसोभए यदि मूल्य आम्दानी अनुपात १० छ भने यसको मतलब यो हो कि यदि हामीले रु. १० हामी पुन कमाउनेछौं। त्यसोभए, कुल मिलाएर हामी यहाँ १०% को रिटर्न कमाउँदैछौं र मानौं यदि मूल्य आम्दानी अनुपात ३० छ भने यसको सीधा अर्थ हो कि यदि हामीले रु. ३० हामी रिटर्न कमाउनेछौं। त्यसोभए, कुल मिलाएर हामीले यहाँ केवल ३% प्रतिफल कमाउँदैछौं।
अब, यदि हामीले बफेटको नगद स्थिति चार्ट र तिनीहरूको बजारको पीई चार्टलाई अवलोकन गर्यौं भने यसले स्पष्ट रूपमा संकेत गर्छ कि जब बजार मूल्याङ्कन महँगो हुन्छ बुफेटले त्यस समयमा कम लगानी गर्छन् | जब बजार मूल्याङ्कन त्यति महँगो हुँदैन बजारमा थप बुफेटले लगानी गर्छन्। तसर्थ, मार्केट क्याप र जीडीपी अनुपात अवलोकन गरेपछि हामी पीई अनुपातको आधारमा मूल्य गणना गर्न सक्छौं र यसरी बजारमा कति लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट चित्र प्राप्त गर्न सक्छौं।
त्यसैले अहिले बजारमा आम लगानीकर्ता आउँदा मार्केट क्याप टु जीडीपी रेसियो, पीई रेसियो आदिमा खासै ध्यान दिँदैनन र बजारमा आउँछन र आफ्नो लगानी प्रयोग गरेर आइसक्रिमको कोन बनाउन थाल्छन् । एक साधारण लगानीकर्ताले बजारमा आइसक्रिम कोन कसरी बनाउँछ भन्ने कुरा बुझ्न खोजौं।
उनी भन्छन् कि सर्वसाधारण लगानीकर्ता बजारमा आउँछन् । सेयर बजार अलि जोखिमपूर्ण ठाउँ हो, पहिले थोरै लगानी गर्छन र हेर्छन राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्षम भएँ भने, तिनीहरूले थप लगानी गर्छन | विचार गर्नुहोस् कि उसले बजारमा थोरै लगानी गर्छ र बजार तल जान्छ, जसले गर्दा उसको सबै लगानी गुम्छ। यसो भएपछि सेयर बजार भनेको जुवा बाहेक अरु केही होइन भन्ने सोचेर उनी फेरी बजारमा प्रवेश गर्दैनन् ।
अर्कोतर्फ, आम लगानीकर्ताले लगानी गरे र बजार बढ्यो भने उसको आत्मविश्वास बढ्छ । उसले पीई रेसियो इत्यादिमा खासै ध्यान दिनेछैन र बजार बढेको देखेर थप लगानी गर्न थाल्छ। यो चक्र चलिरहन्छ, बजार उकालो लागेको देखेर उसले फेरि थप लगानी गर्छ । उसले बजार राम्रोसँग बुझेको सोच्दैछ । पीई बुझेर र अवलोकन नगरी, उसले बजारमा आफ्नो लगानी जारी राख्छ। र पछि, जब बजार महँगो हुन्छ, त्यस समयमा बजारमा लगानी उच्च स्तरमा हुन्छ। आइसक्रिम कोन जस्तै।
वारेन बफेटको मार्केट क्याप र जीडीपी अनुपातको सूत्रका साथै पीई अनुपात अनुसार, बुफेटले यी सूत्रहरूको आधारमा बजारमा आफ्नो लगानीको ‘पिरामिड’ बनाउँछ भन्ने देख्न सकिन्छ।
त्यसोभए, यदि हामीले माथिका दुईवटा तथ्याङ्कहरू अवलोकन गर्यौं भने, हामीले फेला पार्नेछौं कि आम लगानीकर्ताले बफेटले बजारमा लगानी गर्दा के गर्छन त्यसको ठीक उल्टो गर्छन। आम लगानीकर्ताले बजारमा आफ्नो लगानीको पिरामिडको सट्टा आइसक्रिम कोन बनाउँछ, किनभने बजार मूल्याङ्कन महँगो हुँदा उसको लगानी बढी हुन्छ र यसको विपरीत उच्च मूल्याङ्कनका कारण बजार ध्वस्त हुँदा आम लगानीकर्ताले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ किनभने त्यसबेला उसको लगानी उच्च पक्षमा थियो ।
बुद्धिमान् लगानीकर्ताले यसको ठीक उल्टो गर्छ। उसले बजार मूल्याङ्कन कम महँगो हुँदा बढी लगानी गर्छ र बजार मूल्य बढी वा महँगो हुँदा कम लगानी गर्छ। त्यसकारण, बजार ध्वस्त हुँदा पनि, उसको लगानी सीमित भएकोले धेरै घाटा हुँदैन।
तसर्थ, यदि तपाईं बजारमा सफल लगानीकर्ता बन्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं पनि वारेन बफेट जस्तै बजारमा लगानीको पिरामिड बनाउनु पर्छ। हामीले पिरामिड बनायौं भने मात्र बजारबाट राम्रो आम्दानी गर्न सक्नेछौं।
वारेन बफेट इन्डिकेटरका अनुसार मार्केट क्याप र जीडीपी अनुपातलाई हेरेर, हामीले बजार मूल्याङ्कन महँगो छ कि छैन भनेर सही अनुमान गर्न सक्छौं। तर, यसको साथसाथै हामीले बजारमा मूल्य सृजनाको कति सम्भावना छ भनी पत्ता लगाउन पीई रेसियो पनि अवलोकन गर्न आवश्यक छ।
त्यसैले तपाईं बजारमा व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ वा बजारमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, यो बजार मूल्याङ्कन जाँच गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
हाम्रो https://www.laganisutra.com/laganipro/ एपमा यी सबै कुरा समेटेका छौं। आशा छ तपाईंले यसको फाइदा लिनुहुन्छ।